Amazon akwusila hoverboards n'elu nchekwa ụjọ - News Ọchịchị
Amazon akwusila hoverboards n'elu nchekwa ụjọ
Isiokwu a na-akpọ “Amazon akwusila hoverboards n'elu nchekwa ụjọ” e dere site Alex Hern, n'ihi na theguardian.com on Monday 14 December 2015 09.07 UTC
Amazon amalitela sere ụfọdụ hoverboards si ire ere mgbe ụjọ banyere ọkụ kpatara onwe onye na-guzozie scooters.
A ọnụ ọgụgụ nke hoverboards ahụ a rere on Amazon ugbu a okụrede, na nsonye niile ise ụdị ozugbo enyocha site n'ji omume saịtị BestReviews. Na saịtị now adọ aka ná ntị ga-adị ndị na-azụ na "n'ihi na oge ịbụ, anyị na-adịghị ndidọ ọ bụla hoverboards ruo mgbe ha na-pụtara na-mma ".
Dị ka otu hoverboard-ere ákwà, Swagway, na online ere ahịa ndị chọrọ emepụta inye akwụkwọ egosi na ha ụgbọala "na-Dabara na ọdabara nchekwa ụkpụrụ", ha na-elekwasị anya na batrị na chaja maka nkeji.
Dị ka ikpeazụ Christmas 'ga-enwe electronic onyinye, selfie ruo, kasị hoverboards na-arụpụtara ke nnukwu na China tupu e zụrụ ke nnukwu site resellers na-eme ịchọ mma retouching na branding. N'adịghị ka selfie ruo, Otú ọ dị, hoverboards nwere nnukwu batrị, nke nwere ike ịbụ a siri odachi ọ bụrụ na ha misfire.
Izu gara aga, a hoverboard gbawara ke a ahịa dị na Washington ala, eziga shoppers n'ime egwu. Ọ bụ ezie na ọ dịghị onye e imerụ, nke mgbawa gbara n'isi akụkọ n'ụwa niile.
Ná mmalite December, Britain trading ụkpụrụ ikike dọrọ aka ná ntị azụ ahịa na-lezie anya, na kpughere na 88% nke hoverboards dị n'èzí EU, na ọ nwalere, ama okpu isi nchekwa ndenye ego.
Oge ahụ, Leon Livermore, Onyeisi nke ndị Chartered Trading Standards Institute, kwuru: "Ndị omempụ na amaghi emepụta ga-ejikarị ohere elu ina na-anwa-mmiri ahịa na ọnụ ala ma dị ize ndụ ngwaahịa. Ụfọdụ ngwaahịa na-mere ná mba ọzọ, isi maka esenidụt ahịa, -adịghị ruo eruo na ezi plọg na fuuz maka ke UK. Dị ka a kacha nta, -eji ọkụ ga-elele na atọ pin nkwụnye na ngwaọrụ na-ekwu, ọ ka na-BS1363. Ọ bụrụ na ọ dịghị agụnye ozi a, mgbe ahụ na-adịghị ịzụta ngwaahịa. "
Na-azụ ahịa kwesịrị ijide n'aka na ha na-aghọta na legality nke na-eji a hoverboard, nke nwere ike n'ụzọ iwu kwadoro na-anọkwasị kemgbe na pavement ma ọ bụ nke dịịrị okporo ụzọ na UK.
N'agbanyeghị aha, hoverboards n'ezie tụgharịa gafee n'ala na wiil.
34635	0 David Cameron, Europe, European Union, France, French asụsụ, Getty Images, Philip Hammond, Syria, The Guardian, United Kingdom
← Olee ihe anyị na-eyi na-emetụta anyị na ọnọdụ The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: 25-21 →